South African Christian Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" Choral Documentary | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
English Christian Documentary "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" (Zulu Subtitles)
Ngaso sonke isikhathi endaweni yonke, zonke izinto ezisemkhathini zihamba ngokunembile phakathi kwemizila yazo. Ngaphansi kwamazulu, izintaba, imifula, namachibi konke kunemingcele yakho, futhi zonke izidalwa ziphila futhi zizalane kuzo zonke izinkathi zonyaka ezine ngokuvumelana nemithetho yokuphila…. Lokhu konke kuklanywe ngokumangalisayo—ingabe ukhona Onamandla obusa futhi ahlele konke lokhu? Selokhu safika sikhala kulo mhlaba saqala ukufuna ukudlala izindima ezahlukene ekuphileni. Sisuka ekuzalweni siye ekugugeni siye ekuguleni siye ekufeni, sihamba phakathi kwenjabulo nosizi… Sibuya kuphi ngempela isintu, futhi sizoya kuphi ngempela? Ubani obusa isimiselo sethu? Kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube sezikhathini zanamuhla, izizwe ezinkulu zivelile, amakhosi afikile futhi edlula, kanti amazwe nabantu bachumile futhi bashabalala emagagasini omlando…. Njengomthetho wemvelo, ukuthuthuka kwemithetho yesintu kuqukethe izimfihlakalo ezingapheli. Ingabe ungathanda ukwazi izimpendulo zazo? Idokhumentari ethi Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke izokuqondisa ukuba uthole umsuka walokhu, ukuba yembule zonke lezi zimfihlakalo!